Tuulax oo kormeeray Degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley (DAAWO) | Universal Somali TV
Tuulax oo kormeeray Degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley (DAAWO)
Gudoomiye Kuxigeenka Dhinaca Amniga & Siyaasadda ee Maamulka Gobolka Banaadir ayaa xalay hawlo kormeer ah ku tagay Degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley ee Gobolka Banaadir.
Gudoomiye Kuxigeenka ayaa waxaa kormeerka ku wehlinayay Gudoomiye-yaasha Degmooyinka Wadajir, Dhankiinley, Kaxda iyo Saraakiisha Ciidamada qaarkood.
Ujeedada kormeerkan ayaa ahayd, sidii ay masuuliyiintan ugu kuurgeli lahaayeen hubinta iyo xaqiijinta qaabka ay ciidamada ammaanka isaga kaashadaan hawlgalada lagu suggayo nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka.
Masuuliyiinta ayaa kormeerkooda ku soo gunaanaday Degmada Dharkiinley, halkaasoo ay shir jaraa'id ku wada qabteen Gudoomiye Tuulax iyo Gudoomiyaha Degmada Wadajir, Cabdiraxmaan Maxamed Cali.
Gudoomiyaha Degmada Wadajir oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay in hawlgal amni xaqiijin ah ay ka sameeyeen Shanta Waaxood ee Degmada Wadajir, intaasi ka dibna uu kormeer ugu yimid Gudoomiye Kuxigeenka Dhinaca Amniga & Siyaasadda ee Maamulka Gobolka Banaadir, ka dibna ay yeesheen shir ay kaga arrinsanayeen amniga, kaasoo ku soo dhammaaday is afgarad, sida uu yiri.
Gudoomiye Tuulax oo hadalka qaatay ayaa yiri "Waxaan kormeerkeynii caadiga ahaa ka soo bilownay Saldhiga Degmada Wadajir illaa Saldhig Galbeed (Saldhiga Dharkiinley) oo hadda shirka jaraa'id ku qabaneyno. Intaas waxaan ku soo marnay hawlgalo iyo kormeer oo socod ah, oo aan ugu kuurgalnay nolosha, wada-shaqaynta ciidanka iyo shacabka iyo amniga guud ee Degmada Wadajir."
"Degmadan waxay ka mid ahaan jirtay degmooyinka ugu amniga badan magaalada, welina waan ku tirinaa inay ka mid tahay oo argagixisada aysan ku xoog badnayn. Si taas loo xoojiyo, haddii dul-duleelo yimaadeen ama cadowga uu fursado ka dhex helo degmadan dhexdeeda waxaan ugu talagalnay inaan buu-buuxino meelahaas."
"Maalmihii u dambeeyay waxaa jiray Degmooyinka Galbeed qaybo ka mid ah oo wax laga soo tuur-tuuraayay Garoonka Aadan Cadde iyo meelo kalaba. Anagoo og in dadaal ku jiraan ciidanka, laamaha qaybtan galbeed iyo guud ahaan Ciidanka Booliskaba, waxaa loo baahan yahay in si wadajira la isaga kaashado meelaha cadowgaas uu fursadaha ka helaayo maalin walba, uu kaga dhibaateynayo meelaha muhiimka u ah shacabka iyo guud ahaan dalka oo dhan."
"Cid kasta oo tuhun uu ku jiro ama cid kastoo aan u aragno inay fududeynayso wax kastoo amni-darro keenayo waxaan ka qaadeynaa tallaabo sharciga waafaqsan, hana ka waan-towdo ayaan leenahay."
"Ciidanka Booliska waan uga mahadcelinaya habeen iyo maalin ayagoo shaqooyinka ku jira, mararka qaarkood inay la kulmaan isku dhacyo oo dhaawac iyo dhimashaba ka soo gaarto. Kuli waxay ku dadaalayaan sidii dadka degmadan degan ay u heli lahaayen amni iyo nolol, marka ayagana waan boggaadineynaa. Cid kastoo caqabad loo arkana ciidanka iyo laamaha amnigu diyaar waxay u yihiin tallaabo inay ka qaadaan."
Kan-xigaDadka Coronavirus ugu dhintay deegaan...
Kan-horeDagaal uu ku dhintay nin Sarkaal ah o...
53,322,042 unique visits